2010-10-24 ~ Myanmar Express
ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်က ထူးခြားတဲ့ အကူအညီတခု လာတောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သူ့သားဆီကို အဲဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့ တပည့်ရင်းတယောက် လောက်လွှတ်ပြီး နားချခိုင်းပေးစမ်းပါဆိုတဲ့ အကူအညီဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးကြုံဖူးတာသူ့စကားကြားတော့ တော်တော် အံ့အားသင့်သွားတယ်။ နိုင်ငံခြားသွားချင်လို့ အကြံတောင်းတာ၊ အကူအညီ တောင်းတာတွေ အမြဲကြုံတွေ့နေကျဖြစ်ပေမယ့် အခုလို နိုင်ငံခြားကသား ပြန်လာစေချင်လို့ အကူအညီ တောင်းတာမျိုးတော့ တခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ ဒါ ပထမဆုံးပဲ။ သူ့သား နိုင်ငံခြားထွက်သွားတာ သုံးနှစ်ရှိပါပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အများစုသင်တဲ့ ကျောင်းကြီးတခုက အထက်တန်းပြီးပြီးချင်း သွားလိုက်တာမို့ သွားစက ၁၈ နှစ်တောင် မပြည့်သေးပါ ဘူး။ ဟိုနိုင်ငံရောက်တော့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်မရသေးဘဲ ဝင်ခွင့်သင်တန်း တနှစ်ကြာအောင် တက်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မိဘက မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဆိုတော့ ၁၈ နှစ်ရွယ်သား လေးဟာ ဟိုနိုင်ငံရောက်တော့ ဇောင်းထဲက လွှတ်တဲ့မြင်းလိုဖြစ်ပြီး ပျော်ချင်တိုင်း ပျော်မြူးနေပါတော့တယ်။ပြန်မလာတော့လို့သုံးနှစ်သာ ကြာသွားတယ်။ ဘယ်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်မှ မတက်ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားဗီဇာရနိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေ တခုပြီးတခုပြောင်းတက်ပြီး ဆက်နေပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ပညာရေးဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကြကိုင်ကြတာဆိုတော့ ကျောင်းလခ တနှစ်စာသွင်းရင် ဗီဇာရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ကျောင်းတွေက အများသားကိုး။ ဒီကမိဘများက ပိုက်ဆံပို့နိုင်ရင် ပို့နိုင်သလောက် ဟိုမှာ ကျောင်းသားလုပ်ပြီး နေနိုင်ကြတယ်လေ။ သုံးနှစ်ကြာတော့ မိဘများကပြန်လာဖို့ခေါ်ပေမယ့် သားလေးက ပြန်မလာဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြပြီး ငြင်းတယ်။ နောက်ဆုံးမတတ်သာတော့လို့ လာပြီးအကူအညီ တောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။လူနေမှုအဆင့်အတန်းတဲ့ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်တာကြောင့် သူအကူအညီတောင်းတဲ့အတိုင်း ဟိုမှာနေတာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တပည့်ရင်းချာတယောက်ဆီကို အီးမေးလ် ပို့ပြီး အကူအညီတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သားလိုဖြစ်နေတဲ့ တပည့်ကလည်း ချက်ချင်း ကတိပေးပြီး အလုပ်အားရက်မှာ ဖုန်းနဲ့ချိန်းပြီး သွားတွေ့ပါတယ်။ သူ့အိမ်ကိုခေါ်ပြီး မြန်မာ ထမင်းဟင်းတွေလည်း ကျွေးပါတယ်။ ရင်းနှီးအောင်လည်း ပေါင်းပါတယ်။ သုံးလလောက်ကြာတော့ တပည့်ဆီက လက်လျော့လိုက်ရကြောင်း အကြောင်းကြားပါတယ်။ ကလေးက ဘယ်လိုမှ တိုက်တွန်းလို့မရတဲ့အကြောင်း၊ ဟိုမှာပဲ တသက်လုံးနေဖို့ ကြံရွယ်ထားပုံရကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ (Quality of Life) 'လူနေမှု အဆင့်အတန်း' ဆိုတဲ့စကားကို ပါးစပ်ကမချအောင်ကို ပြောနေတယ်ဆရာရဲ့ လို့လည်း ဖုန်းထဲက ပြောပြပါတယ်။ဘယ်သူ့အပြစ်လဲအကျိုးအကြောင်း မိတ်ဆွေဖြစ်သူကို ပြောပြတော့ မျက်ရည်ကျရှာတယ်။ ကိုယ်တိုင်သွားခေါ်မှ ဖြစ်တော့မှာပဲလို့လည်း ညည်းညူသွားပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ရက်ပေါင်းအတော်ကြာအောင် စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒီကလေးဟာ ဒီမှာလည်း ရွှေပေါ်မြတင်နေခဲ့ရတာပါ။ ဒေါ်လာနဲ့ပေးပြီးတက်ရတဲ့ကျောင်းမှာ အထက်တန်း ကုန်တဲ့အထိ တက်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ဘဝ တလျှောက်လုံး မရှိဆိုတဲ့စကား မကြားခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါတောင်မှ ဒီ 'ကွာလတီအော့လိုက်ဖ်' ဆိုတဲ့စကား ဘာကြောင့် နှုတ်ဖျားကမချ ဖြစ်နေရတာလဲ။ ကလေးရဲ့ အပြစ်လား၊ အလိုလိုက်တဲ့ မိဘများရဲ့အပြစ်လား။ ဒါမှမဟုတ် ဒါမှမဟုတ် . . .။မျိုးချစ်ကြီးတွေ မဟုတ်ပေမယ့်ဒီကိစ္စကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဝေဖန်စောကြောနေမိတယ်။ ကလေးမိဘများ ကလည်း ထူးကဲတဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ မဟုတ်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားကိုမှ အထင်ကြီးတတ်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ သွားနေဖို့လည်း စိတ်ကူးတောင် ကြည့်ဖူးသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်လာကြပြီး တင့်တောင်းတင့်တယ် နေနိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သားလေးကလည်း ဒေါ်လာပေးတက်ရတဲ့ကျောင်းမှာ တက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ စာကြိုးစားရှာပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာလည်း အအားမနေပါဘူး။ သင်တန်း အမျိုးမျိုး တခုပြီးတခု တက်နေခဲ့တာပါ။ကျောင်းတွေနဲ့ ဆိုင်သလား၁၈ နှစ်အရွယ် ကလေးတယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲကို ဒီ 'ကွာလတီအော့လိုက်ဖ်' ဆိုတဲ့စကားက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရောက်သွားခဲ့တာလဲ။ သူတက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းတွေ သင်တန်းတွေနဲ့များ ဆိုင်နေလေသလား။ သူတက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းတွေမှာ နိုင်ငံခြားသားက အများစုဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားတွေက လူမျိုးစုံသလို ဆရာတွေကလည်း နိုင်ငံစုံကလာကြတာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားက သင်ရိုးတွေ အတိုင်းပဲသင်တယ်။ မြန်မာကျောင်းတွေက သင်ရိုးတွေမသင်ဘူး။ မြန်မာပြည်က စာမေးပွဲတွေ မဖြေဘူး။ အထက်တန်းပြီးရင် နိုင်ငံခြားသွား ကျောင်းဆက်တက် ကြမှာ။ ဒီအထိ ကိစ္စမရှိဘူး။ နိုင်ငံသားတိုင်း ကိုယ်ကြိုက်ရာကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ခွင့်ရှိတာပဲ။ နိုင်ငံခြားသွား ပညာသင်တာ မကောင်းတဲ့ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ကျောပိုးအိတ်သမားတွေလားအဲဒီလိုကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေနဲ့များ ဆိုင်နေမလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျောင်းတချို့က ဆရာ ဆရာမတွေကို သေသေချာချာ စိစစ်ပြီး အရည်အချင်း ပြည့်မီသူတွေကိုသာ ခန့်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တလေက စီးပွားရေးသမားလို ဈေးတွက်တွက်ပြီး 'ပေါချောင်ကောင်း'တွေရှာပြီး ငှားတာမျိုး လည်းရှိတယ်။ အခုလိုကျောင်းမျိုးတွေ မပေါ်ခင်အချိန်က အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းကျောင်းတခုဖွင့်ခဲ့ဖူးတော့ တကိုယ်တော် ကျောပိုးအိတ်သမားတွေ လာပြီး ဆရာအလုပ်လျှောက်တာ မကြာခဏ ကြုံဖူးတယ်။ သူတို့က ပိုက်ဆံ မကုန်ဘဲ ကမ္ဘာအနှံ့လည်ရအောင် ရောက်ရာအရပ်မှာ ကြုံတဲ့အလုပ် ဝင်လုပ်ပြီး စရိတ်ရှာလေ့ရှိကြတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ အားရအောင် လည်ပတ်ပြီးတဲ့အခါ နောက်တနိုင်ငံ ကူးသွားကြတယ်။ ကြုံရာဝင်လုပ်ကြ ပြန်တယ်။ပညာတတ်တိုင်း ဆရာမဖြစ်အဲဒီလို ကျောပိုးအိတ်သမားတွေထဲမှာ တချို့က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ပြီး တချို့က ကျောင်းဆရာတွေ ဖြစ်တယ်။ တချို့ကျတော့လည်း သိပ်ပညာမတတ်တဲ့ အောက်ခြေအလုပ်သမားတွေ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းဆရာ အလုပ်ဆိုတာ ပညာတတ်တိုင်း လုပ်လို့ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာဖြစ် သင်တန်းအောင်မှ လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆရာလုပ်ဖို့ အရည်အချင်း မရှိသူတွေ ဆရာဝင်လုပ်နေကြတဲ့ ကျောင်းမျိုးဆိုရင် ကလေးတွေကို မှန်ကန်တဲ့ ပညာရပ်တွေ မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ပေးနိုင်ပါ့မလား။ပြင်ပသင်တန်းတွေ ပိုဆိုးနောက်ပြီး ပြင်ပသင်တန်း ဆိုတာတွေက ပိုပြီးဆိုးသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေး နည်းနည်းဖတ်တတ်တယ် ဆိုရုံလောက်နဲ့ နိုင်ငံခြားက စာအုပ်ကြီးတွေကိုင်ပြီး ဆရာဝင်လုပ်နေကြသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဆရာဖြစ် လက်မှတ်ဆိုတာဝေးလို့ သူတို့ ဆရာကြီးတဆူလုပ်ပြီး သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဘာသာရပ်ကိုတောင် ဘွဲ့ရအောင် သင်ယူဖူးခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ စာအုပ်ကြီးထဲက မှတ်စုထုတ်ပြီး ကြက်တူရွေးလို ရွတ်ပြနေကြတာ များတယ်။ အဲဒီလို သင်တန်းတွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး တက်ခဲ့ကြတဲ့ကလေးတွေ အများစုက စကားပြောလိုက်ရင် အင်္ဂလိပ် စကားလုံးကြီးတွေ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ပဲ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူတို့က ဂလိုဘယ်ဆိုတာကြီးနဲ့ ကိုင်ပေါက်လိုက်ကြတယ်။ စတစ်ဂလစ်က ဘာပြောတယ်။ ဖရိုက်မင်းက ဘာပြောတယ်။ ဖူကူးရာမက ဘာပြောတယ် ဆိုတာတွေ အပ်ကြောင်းထပ်နေတော့တယ်။ ပါးစပ်တွေမှာ အမြှုပ်တစီစီနဲ့။အဆင့်အတန်းရှိတဲ့လူဒီလိုကလေးမျိုးတွေကပဲ လူ့အဆင့်အတန်းဆိုတဲ့ စကားအများဆုံး ပြောကြတာ ဖြစ်တယ်။ အပ်ကစပြီး မော်တော်ကားထိ ဝယ်လို့ရတဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေ နေရာတကာရှိပြီး သုံးချင်တိုင်းသုံး၊ ဖြုန်းချင်တိုင်းဖြုန်း ပျော်ချင်တိုင်းပျော်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာနေမှ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့လူလို့ သတ်မှတ်တယ်လို့ ထင်နေကြပုံ ရပါတယ်။ သင်တန်းမှာ သူတို့သင်ယူခဲ့ကြတဲ့ ဂျီဒီပီတွေ ဂျီအင်ပီတွေ လူတထောင်မှာ မော်တော်ကား ဘယ်နှစီး၊ တယ်လီဖုန်း ဘယ်နှလုံး ဆိုတဲ့ စာရင်းအင်း အချက်အလက်တွေ ကိုကြည့်ပြီး နိုင်ငံတနိုင်ငံ၊ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ အဆင့်အတန်းကို သတ်မှတ်ရတယ်လို့ပဲ ယူဆထားကြတာကိုး။ဘယ်သူမပြု မိမိမှုလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုဆိုတာ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေက ဖန်တီးပေးတာ မဟုတ်ဘူး စိတ်ချမ်းသာမှုရှိမှ အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတာ ကလေးတွေက ဘယ်လိုသိမှာလဲ။ စိတ်ချမ်းသာမှု ရှိဖို့အတွက် လွတ်လပ်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှခြင်းနဲ့ တရားမျှတမှုရှိခြင်းတို့ကသာလျှင် ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာလည်း မသိရှာကြဘူး။ မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီး မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့က အနေဝေးကြတယ်လေ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ သင်တဲ့ကျောင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားစာတွေသင်တဲ့ သင်တန်းတွေပဲတက်ပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒီတော့လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးကို ဘယ်အထင်ကြီး တော့မှာလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာနေမှပဲ လူ့အဆင့်အတန်းမြင့်တယ်လို့ ထင်နေကြတော့ မှာပေါ့။ မိတ်ဆွေကြီးအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာမှလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပဲလေ။လူထုစိန်ဝင်း
ကျွန်တော်ရဲ့ ဂျီတော့ အကောင့်မှာ အကောင့် စပြီးလုပ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ အလံပုံကို တင်ထားခဲ့တာ ဒီနေ့အထိပဲ။ ကျွန်တော့် အကောင့်ထဲကလူတွေသိပါလိမ့်မယ်။ Facebook နဲ့ တခြား social sites တွေ မှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ကတည်းက တင်ထားတာ ခုထိပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်လို့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အလံကို လေးစားလို့၊ တန်ဖိုးထားလို့ပါ။ အလံရဲ့အရောင်ကို ကြိုက်လို့လဲ မဟုတ်ဘူး၊ အလံက လှလို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့် မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ ကျွန်နော့်မှာ အဖော်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ဒီလ ၂၁ ရက်နေ့က စ တာပဲ။ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အလံပုံ (အလံဟောင်းပုံ) တွေကို ဂျီတော့တွေမှာရော၊ Facebook အပါအဝင် တခြား ပရိုဖိုင်တွေမှာရော ပလူကို ပျံလို့ တင်လိုက်ကြတာ။ အားရစရာပဲ။ ဒေါ်လာစား အတိုက်အခံတွေရော၊ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား အတိုက်အခံတွေရောပဲ။ ဒါပေမယ့် ခံယူချက်တွေက အရမ်းကို ယုတ်ညံ့လွန်းတယ်။ ခံယူချက်ကတော့ အစိုးရဘာလုပ်လုပ် ကန့်ကွက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကန့်လန့်တိုက်နေကြတာ ပါ။ အလွန် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်။ အဲ့ဒီထက် စိတ်ပျက်ဖို့ ပိုကောင်းတာက အလံပေါ်မှာ အရိုးခေါင်းပုံတွေ၊ ဆဲဆိုထားတဲ့ သင်္ကေတတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်ပုံတွေနဲ့ ဖျက်ညှက်ကပ် တွေလုပ်လာကြတယ်။ ဒါကလည်း ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး အရင် အလံဟောင်းတုန်းကလည်း လုပ်နေကြတာပါပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကို ကိုယ်မှတန်ဖိုးမထားရင် ဘယ်သူတွေက တန်ဖိုးထားမှာလဲ။ ကန့်လန့်တိုက်ရတိုင်း အဟုတ်ကြီးမှတ်မနေကြတယ်။ အလွန့်အလွန်ကို စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အတိုက်အခံတွေပါ။ အလံသစ်မှာလဲ ဒေါင်းပုံတွေ လည်း ထည့်လို့ထည့် လျှောက်လုပ်ကြတယ်။ သူ့ဘာသူ ခွတ်ဒေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကဒေါင်း ပဲဖြစ်ဖြစ် တိရစ္ဆာန်က တိရစ္ဆာန်ပဲ။ တိရစ္ဆာန် ကို ခေါင်မိုးအထက်မှာ လွှင့်ထူပြီး ဦးညွတ်အလေးပြုနေရမှတော့ အဲ့ဒီလူတွေက တိရစ္ဆာန်လောက်မှကို အသုံးမကျ၊ အဆင့်တန်းမရှိလို့ပေါ့။တစ်ချို့ကရှိပါသေးတယ် အာဖရိက က အလံနဲ့တူလို့တဲ့ အပြစ်တင်ကြတယ်။ အာဖရိက က တူတဲ့အလံတွေကို သဲကြီးမဲကြီး လိုက်စုပြီးတောင် ယှဉ်ပြလိုက်သေးတယ်။ တော်တော် သနားစရာကောင်းတဲ့ အတွေးနိမ့်နိမ့် ပိုင်ဆိုင်သူတွေပါ။ မသိရင် မှတ်ထားကြစေချင်ပါတယ် အလံသစ်ရဲ့ အခုသုံးနေတဲ့ အရောင်သုံးရောင်က ၁၉၄၂ ခုနှစ်ကတည်းက သုံးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အလံဟောင်းတွေရဲ့ အရောင် ၃ ရောင်ကို ပြန်သုံးထားတာပါ။ အာဖရိကနဲ့တူတော့ရော ဘာဖြစ်မှာလဲ။ အီသီယိုးပီးယားနဲ့ လစ်သူရေးနီးယားနဲ့ တူလို့ သိက္ခာကျတယ်လို့ ခံယူကြရမှာလား။ ပြောနေကြတာတော့ အစိုးရက ရတြာချေတဲ့ အလံတဲ့။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အာဖရိကတိုက်က ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ အလံနဲ့တူလို့ဆိုပြီး အတိတ်နမိတ်တွေ ကောက်နေတကြတယ်။ တစ်ချိန်က အတိုက်အခံဘလော့တွေနဲ့ ဂျီတော့တွေပေါ်မှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သီချင်းလေး မှတ်မိပါသေးတယ်။ ဒေါ်လာစားတို့ အားကျနေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံကြီက ရှခီယာ ပြောသွားတာပါ။ ဝါကာဝါကာ ဆိုတဲ့သီချင်းမှာ ကျွန်မတို့အားလုံး အာဖရိက တွေပါ တဲ့။ အဲ့ဒါ သိက္ခာ ကျစရာလား။ သူတို့က အာဖရိက မျိုးဆက်တွေမို့ ဒီလောက် ချမ်းသာပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ မြင့်နေချိန်မှာ ပြန်ပြီး ဝန်ခံနိုင်ကြတယ်။ မြန်မာအတိုက်အခံတို့က ဘာမှတောင် မဖြစ်သေးဘူး ၁၉၄၃ က အရောင် သုံးရောင်ကို ပြန်လက်မခံနိုင်ကြတော့ဘူ။ အာဖရိက က အလံတွေနဲ့တူလို့ ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေက အလံတွေနဲ့ တူလို့ ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ တကယ်လို့များ တရုတ်နိုင်ငံက အလံနဲ့ တူကြည့်ပါလား။ အခု အာဖရိက အလံတွေနဲ့ တူတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကပဲ ပိုးစိုးပက်စက် ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ မြောက်ကိုရီးယားတို့ အိန္ဒိယ တို့ ရုရှားတို့နဲ့ တူကြည့်ပါလား။ ဝေဖန်လိုက်ကြမှာ သောက်သောက်လဲ။ အမေရိကန်နဲ့ တူအုံးမလား။ အပြစ်ရှာပြောအုံးမှာပဲ။ အရင်တုန်းက အလံဆိုတာ ဘယ်နေလို့နေမှန်းမသိ၊ စပါးနှံတို့ စက်သွားတို့ ကြယ်ဖြူ ၁၄ လုံးတို့ ဆိုတာ တစ်ခါမှ ကီးဘုတ်ပေါ်က မရိုက်ဖူးကြဘူး။ ခုမှ အစိုးရက အလံပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ့ ဂျီတော့တွေ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်တွေ၊ ရှိသမျှ ပရိုဖိုင်တွေမှာ အလံတွေ တန်းစီလို့။ အရင်တုန်းက တစ်ယောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံအလံပုံ တင်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။ ပစ်စလက်ခက်ပဲ။ ခုမှ တင်လိုက်ကြတာ။ အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖွင့်လိုက်ကြတာ။ အဲ့ဒီလူတွေ ကို ကျွန်တော် မေးခွန်းလေး နှစ်ခု မေးချင်လွန်းလို့ပါ၁။ အလံဟောင်း သုံးလာတဲ့ ကာလ ၃၆ နှစ်မှာ ဂျီတော့တွေ ပရိုဖိုင်တွေမှာ တင်ဖူးပါသလား???????????? အခု အလံဟောင်းက နိုင်ငံတော်အလံမဟုတ်တော့ဘူး ဆိုမှ ဘာကြောင့် တင်နေရတာပါလဲ???????၂။ အခုလောလောဆယ် အလံဟောင်းကို အရမ်းကို တန်ဖိုးထားပြီး အဓိပ္ပါယ်တွေဖွင့် ကာ ပရိုဖိုင်တွေမှာတင်နေသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဲ့ဒီ အလံကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုံများအတိုင်း မိုက်ရိုင်းစော်ကားထားသူတွေကို ဘာကြောင့် မရှုံ့ချခဲ့ပါသလဲ??????????? တကယ်လို့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရက်တွေကို မသိလို့ မရှုံ့ချခဲ့ဖူးဆိုလျှင် အခု ကျွန်တော် ဖော်ပြလိုက်ပါပြီ။ စပါးနှံ၊ စက်သွားနဲ့ အရွယ်တူကြယ်ဖြူ ၁၄ လုံးကို တန်ဖိုးထား လေးစားသူများ က အောက်ဖော်ပြပါ အတိုက်အခံများကို ဘယ်လိုရှုံ့ချမလဲ ကျွနော် နားထောင်ချင်ပါသေးတယ်။ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ သိပ်ချစ်တဲ့ အလံကြီးကို ရိုင်းစိုင်းစော်ကားနေကြတဲ့ ဒီမိုအတိုက်အခံ ဒေါ်လာစားတွေပါဗျာ..... Myanmar Express